Dharaaraa na soo maray: Hanbalyo iyo Bogaadin
You are here: Home Home Dharaaraa na soo maray: Hanbalyo iyo Bogaadin
Waa Dharaar…..Waa Dharaar ka mid ah Dharaaraha ugu mudan dharaaraha ay shacbiga Somaliland tirsadaan. Waa Dharaar aynu ka yeelannay dharaarihii jaan ee uu inagu qasbi jiray nidaamkii inagu habsaday.
Milicsiga Dharaartii Dharaaraha:
31-Guurada SNM: 6/4//1981kii – 6/4/2012ka
(Shirweynihii 4aad ee SNM: Jigjiga 1984kii)
Waa Dharaar…..Waa Dharaar ka mid ah Dharaaraha ugu mudan dharaaraha ay shacbiga Somaliland tirsadaan. Waa Dharaar aynu ka yeelannay dharaarihii jaan ee uu inagu qasbi jiray nidaamkii inagu habsaday. Waa Dharaartii aynu ka hor geynay maalintii aynaan mahadin ee 21kii Oktoobar ee 1969kii. Dharaartani waa Dahraartii aynu ku ballaysinnay halgankii hubeysnaa ee dibuxoreynta Qaran ee aynu ku soo dhacsannay gobannimadeennii iyo madax-bannaanideenniiba. Dharaaruhu iskuma jiraane, waa 6dii Abriil. Weliba waa kow iyo soddon guuro. Kow iyo soddon sannadood oo isugu jira: toban sannadood oo halgan hubeysan ahaa iyo kow iyo labaatan sannadood oo ahaa: dibuheshiisiin, hub-dhigis, nabadayn, dibudhis iyo horumarba. Guure iyo galab-carrowba geeddiyaal badan ayaa la soo gooyay; welina fari kama qodna. Meel Ilaahay lagu mahadiyo waa aynu joognaa, in kasta oo ay wax badani inoo dhiman yihiin.
“SNM waxay ahayd xarakad ama dhaqdhaqaaq shacbiya oo hubeysnaa oo ka dhashay dareenka bulsho ama shacbi ka gilgishay cadaadiskii iyo xasuuqii Nidaamkii Siyaad Barre, shacbigaas oo ku kala noolaa dalka gudihiisa iyo dibaddiisaba. SNM waxay ku barbaartay dareenkii u kala gudbayay: Hargeysa, Burco, Muqdisho, Khaliijka, London iyo meelo kaleba. Ma jirto cid ama magaalo gaar ahaan keligeed u sheegan karta SNM. Ciidankii unugga ahaa ee ugu horreeyay ee SNM waa Guutadii 4aad ee Gaaskii Axmed Gurey ee Jabhaddii Soomaali-Galbeed. Saldhiggii ugu horreeyay ee SNM wuxu ahaa Durya. SNM iyo aasaaskeediiba waa ay ka weyn yihiin wax qof, koox ama magaaloba sheegato. SNM waxa ahaa qof kasta oo aamminsanaa mabaadiida iyo ujeeddooyinka Ururka oo si dadban ama si toosanba gacan uga geystay halgankii hubeysnaa ee dibuxoreynta Qaran ee ay SNM horseedka ka ahayd. SNM ma ahayn oo keliya intii tallowday ee ku hawlanayd dagaalkii hubeysnaa, bal se waxa iyaguna SNM ahaa intii halista daaqaysay ee si dedan iyo si daalacanba dalka gudihiisa uga adeegaysay halgankana tabantaabinaysay. SNM waxa ahaa intii dibadaha ku sugnayd ee af iyo addinba halganka kaga qayb-gashay. Waxa aan marnaba bogagga taariikhda ka tirmeyn kaalintii xurmada iyo qaddarintaba lahayd ee ay raacatada iyo beeralayduba ka qaateen halgankii hubeysnaa ee SNM horseedka ka ahayd. Waxa kale oo lama-illaawaan ah doorkii xurmada iyo xusuustaba lahaa ee ay haweenku ka qaateen qaybihii kala duwanaa ee halgankii hubeysnaa. Waa gef iyo meel-ka-dhac aragtida ah in qof kasta oo Isaaq ahaaba SNM ka tirsanaa. Haddii ay SNM taageerada iyo kaalmada ugu badan ka heli jirtay Isaaqa, waxa kale oo iyaduna hubaal ah in wax-yeello badanina qaar badan oo beeshaa ka mid ah ay Ururka ka soo gaadhi jirtay.”
Dohdu Waamo maahee,
SNM waxa lagaga dhawaaqay magaalada London, 6/4/1981kii halkaas oo uu Shirweynihii ugu horreeyay ee SNM ku qabsoomay. Taariikh yar dheeraan karta, si aan idiin ku soo kobo bal aan isku dayo in aan idiin shaxeeyo lixdii Shirweyne ee SNM soo maray:
6dii Abriil, 1981kii
Axmed Maxamed Guuleed
Sheekh Yuusuf Cali Sh. Madar
Kal-fadhigii 3aad ee
C/Qaadir Koosaar Cabdi
C/Raxmaan Axmed Cali
Bishii Juulay 1983kii ayuu Magaalada Harar ku qabsoomay Shirweynihii 3aad ee SNM, halkaas oo lagu
(Kal-fadhigii: 3aad ee G/Dhexe ee Nof. 1983kii)
doortay hoggaan ay u kala sarreeyeen: Sheekh Yuusuf oo Guddoomiye noqday, Xasan Aadan Wadadiid oo Guddoomiye-ku-xigeen ahaa iyo Axmed Ismaaciil Cabdi (Duqsi) oo Xoghaye Guud loo doortay. Waa qaabkii ay SNM u dhisnayd beryahaa. Shirweynahaas oo lagu falanqeeyay Dastuurkii Ururka markii ugu horreysay ayaa lagu heshiin waayay. Ka dib Shirweynahaa waxa lagu gaadhay saddex Go’aan oo baadi-sooc gaar ah lahaa:
In Dastuurka SNM lagu falanqeeyo Go’aanna lagaga gaadho Kal-fadhiyada Golaha Dhexe ee SNM ee Shirweynaha ka danbeeya,
In Golaha Dhexe cod 2/3 ah ku beddeli karo hoggaanka Ururka, Guddida Fulintana cod hal-dheeri ah,
Shirweynihii 4aad ee SNM oo 6dii bishii Ogos, 1984kii ka furmay Magaalada Jigjiga, waxa lagu go’aansaday in kala-guurka Shirweynayaasha laga dhigo laba sannadood. Si kale haddii aan u idhaahdo waxa la go’aamiyay in labadii sannadoodba mar la qabto Shirweynayaasha Ururka. Shirweynihii 5aad oo ku qabsoomay Magaalada Harar Feeberweri 1987kii ayaa mar kale lagu go’aansaday in kala-guurka Shirweynayaasha laga dhigo saddex sannadood, sidaas ayuu Shirweynihii 6aad ee SNM ku qabsoomayaa 31/3/1990kii. Waayihii Jabhadnimo ee aanu ku noolayn ayaa na barayay in muddada hadba la dheereeyo iyo in aan lagu deg-degin beddelaadda madaxda. Intaa aan kaga baxo tilmaamihii koobnaa ee aan ka bixinayay Shaxda Shirweynayaashii SNM.
Ku-sinnaan Bishii Feeberweri, 1982kii, xilligaas oo Dhagax-tuurkii Ardaydu ka dhacay magaalooyinka ugu waaweyn ee Gobolladii: Woqooyi-Galbeed, Tog-dheer iyo Sanaag, lana xukumay Barbaartii UFO, ayay saraakiishii ugu horreysay iyo Guutadii 4aad u tallaabeen Itoobiya. In yar ka dibna Hoggaankii SNM oo dibadaha ku sugnaa gaar ahaan Khaliijka iyo London ayaa isna Addis-Ababa yimid. Si rasmiya ayay hawlihii Ururku halkaas uga bilaabmeen. Addis-Ababa oo SNM ugu suntanayd Saldhigga Guulalle ayaa laga bilaabay hoggaamintii hawsha Ururka iyada oo in yar ka dibna hawsha baaxaddeedii loo soo wareejiyay Saldhigyadii Aroori ee Jigjiga iyo Raamaale ee Diri-dhabe.
Dagaal ballaadhan oo dhinacyo badan lagaga qaaday Nidaamkii Siyaad Barre ayaa bilaabmay. Dagaal yar ma ahayn ee dagaal ballaadhan oo wejiyo badan leh ayuu ahaa. Dagaal shacbiya, hubeysan oo siyaasiya ayuu ahaa oo ummad gadoodday ku soo dhacsanaysay madax-bannaanideedii iyo xuquuqdeedii laga duudsiyay. Iyada oo Saldhiggii ugu horreeyay ee SNM Durya ahaa, kaas oo la furay Feeberweri 1982kii, haddana Ururku isaga oo sii ballaadhinayay saldhigyadiisa maalinba maalinta ka danbeysa, Bishii Ogos 1982kii, waxa la furay saldhigyadii Raaca 2aad ee kala ahaa: Dibiile (Xarshin), Laan-qayrta, Awaare iyo Gaashaammo. Waxaan aad u xusuustaa maalintii noogu horreysay ee aanu Saldhigyadaa cusub u ambo-baxaynay. Duleedka Jigjiga, meel Bariga ka xigtay Xerada Garab-case ayaanu subaxnimo isku urursannay. Ciidan Itoobiyaan ah oo waddada sii miino-baadhay ayaa na sii kaxeeyay ilaa Qabri-bayax. Ciidan kale ayaa halkaa naga sii raacay oo iyaguna ka hor jidka sii miino-baadhay. Harta-sheekha ayay na gaadhsiiyeen. Ciidan kale ayaa halkaa naga sii kaxeeyay oo na geeyay Xarshin waqti ay saacaddu ku beegnayd 9.00kii habeennimo. Garo’ oo waxaanu Jigjiga ka soo baxnay waqti ku beegnaa 9.00kii subaxnimo ilaa 10.00nadii. Beryihii danbe inta aanu Diri-dhabe ama Harar ka soo qedayno ayaanu ilaa Baali-dhaye ku hoyan jirnay. Waa beryihii danbe ee aanu meel walba jabsannay. Waxaanan illoobayn soo-dhaweyntii diirranayd ee odey Dhego-caleen la odhan jiray oo reer Xarshimeed ahaa.
Beryahaa wax gaadiid ah waxaanu lahayn Baabuur yar oo Land-rover ah iyo Iska-roga Cas oo uu lahaa nin la odhan jiray Maxamed-Guraaye. Land-roverka waxa la soo tallaabay Aadan Saleebaan, waxaana dirawal ka ahaa Cabdilqaadir-Wershed. Waxa kale oo jiray Baabuur yaraa oo Toyota ah oo uu la soo tallaabay Ciise Curaagte, bal se inta badan wuu jabnaa. C~abdilqaadir Wershed waxa baabuurka Land-roverka ah ka nasin jiray Xasan Waddo iyo Carabayte. Beryihii danbe waxaanu mari jirnay Jidka Qaaxo oo markii ugu horreysay uu maray nin Nirig la odhan jiray oo ku jaadlayn jiray baabuur Toyota ah oo buluukiya. Baabuurkaa raqdiisii beryihii danbe waxay olli jirtay magaalada Rabaso.
Aniga oo aan maanta u ambo-bixin in aan si tifaf-tiran idiin ka sheekeeyo halgankii hubeysnaa ee dibuxoreynta Qaran ee SNM horseedka ka ahayd, aniga oo u holladay oo keliya in aan maalintan sharfan xus iyo maamuusba inta aan hidin karo muuneeyo, bal hadda aan isku dayo in aan idiin qodobbeeyo marxaladihii kala geddisnaa ee uu halgankani soo maray aniga oo qaybtan ka soo xiganaya Barnaamajka Siyaasigee SNM.
1. Marxaladdii guuxa, cabashada iyo ka-damqashada xukunkii Faashiga ahaa oo ahayd: 1969kii – 1980kii;
Jebintii Xabsiga Dhexe ee Mandheera (Badbaado),
Hawl-galladaa ciidan waxa bar-bar socday oo kaabayay kuna ladhnaa, hawl-gallo siyaasadeed, warfaafineed iyo qaar ijtimaciyaba. 1982kii waxa magaalada London ka soo bixi jiray Jariidad Biloodle ah oo afka Ingiriisiga lagu qori jiray oo la odhan jiray “Somalia Un-censored”. Waxa kale oo isla xilliyadaa London ka soo bixi jirtay Jariidad kal-soo-bax (periodical) ahayd oo afka carabiga ku soo bixi jirtay oo la odhan jiray: “Al-Soomaal-Al-Jadiid”. “Somalia Un-censored” markii ay joogsatay, dhowr iyo siddeetannadii waxa kale oo London ka soo bixi jirtay “Liberty” oo Biloodle afka Ingiriisiga ku soo baxda ahayd. Saldhigii Guulallee ee Addis-Ababa 1983kii waxa is-na ka soo bixi jirtay Jariidad Toddobaadle ah oo af-Carabiya oo la odhan jiray “Al-Mujaahid”. Waa beryaha uu samaysmayo ama hano-qaadayo magaca can-baxay ee “Mujaahid”. Qormo danbe oo aan kaga hadli doono Cududdii Hubeysneyd ee SNM oo aan xus iyo xusuusba uga dhigayo Mujaahidiinta naftooda hurtay, ayaan si faah-faahsan mowduucaa ugu qaadaa-dhigi doonaa, haddii Eebbe idmo. Laantii SNM ee Woqooyiga Maraykanka iyo Kanada, waxa iyadana laga soo saari jiray kal-soo-bax saddex-biloodle ah oo la odhan jiray “Somali Horizon” oo afka Ingiriisiga ku soo bixi jiray. Xaruntii SNM ee Almisna waxa ka soo bixi jiray “Dhanbaal” oo Biloodle ahayd, laguna qori jiray af-Soomaali.
Idinka oo ii dul-qaadan doona haddii aan ku yar hakado dhufayskan Warfaafiinta iyo Wacyi-gelinta oo ahaa dhufayskii aan waqti-halgameedkaygii intiisii badnayd ku qaatay, aniga oo aan dhufaysyada kalena ka madhnayn. Warfaafin ahaan dhuuntii ugu weyneyd ee aanu adeegsannay waxay ahayd Idaacaddii. Bishii Oktoobar 1982kii SNM iyo SSDF Heshiis ay wada galeen ayaa waxa ka abuurmay Codkii Jabhadaha Mucaaridka ah oo loogu wan-qalay Radio Halgan kaas oo lagu beddelay Radio Kulmis oo SSDF-tu lahaan jirtay.
Bishii Abriil 1988kii markii ay Heshiiska wada galeen Siyaad Barre iyo Mengistu Xayle Mariyam ayaa la xidhiidhay Radio Halgan oo Addis-Ababa ku yaallay. Qodobbadii Heshiiskaa aanay labadii odey mahadin ayaa waxa ku jiray in dacaayadda la kala joojisto. Maalin taariikhiya ayay ahayd maalintii la xidhay Radio Halgan. Bil ammaara waxa la xidhay 6/4/1988kii oo ku beegnayd sannad-guuradii 7aad ee SNM. Xuskaa maalintaa amran waxaanu ugu talo-gallay oo maalmahaa la duubay Heeso ay qaadayeen koox la odhan jiray Colka Maxamed Mooge oo aanu maalmahaa abaabullay. Waxa ka mid ahaa: Axmed Maxamed Good (Shinbir), Cumar Xasan (Rooraaye), Xasan Arami iyo qaar kale oo badan.
Feeberweri, 1989kii ayaanu Xaruntii Ururka SNM u rarnay Balli-gubadle (Almis) oo uu ku qabsoomay Kal-fadhigii 2aad ee aan Caadiga ahayn ee Golaha Dhexe ee SNM. 5/5/1989kii ayaa mar kale la furay cod ku hadla magaca SNM kaas oo loogu wan-qalay Radio SNM oo ka hadli jiray Xaruntii Dhexe ee SNM. Radio SNM tan iyo maalintaa ilaa dibuxoreyntii dalka maalin keliya kama bixin hawada, marka laga reebo 12/4/1990kii oo ay Mujaahidiintii Idaacadda ka hawl-gelaysay muddaaharaad dhigtay mooyaane. Radio SNM wuxu ahaa mid wareega, Balli-gubadlena ilaa saddex xarumood ayuu ku lahaa oo hadba mid u ayaanu u wareegi jirnay.
Bal hadda aan isku dayo in aan halkan ku taxo Mujaahidiintii ka hawl-geli jirtay Radio SNM xilliyadaa aanu halgamaynay:
Inj. Maxamed Maxamuud Xasan (Mijir),
Inj. Siciid Cismaan Maxamuud (Ina Casayr),
Ibraahin Axmed Maxamed (Shiine),
Xuseen Cabdillaahi Yuusuf (Deeqsi),
Safiya Cali Yuusuf,
Xasan Maxamed Yuusuf,
Maxamed Cabdi Yuusuf,
Marxuum Muuse Aadan Yuusuf,
Daa’uud Xuseen Xiirey,
Axmed Xuseen Warsame,
Rashiid Maxamed Jaambiir,
Maxamuud Muuse Cawaale,
Xasan Shukri Aw Cali,
Axmed Xuseen Cali (Cawaale),
Rashiid Cismaan Maxamed (Lugey),
Marxuum Cabdinaasir Cumar Xuseen,
Waxa kale oo beryahaa yar-yaraa oo Idaacadda ku soo barbaaray: Axmed Cumar Toosh, Khadar Cakuule iyo Khadar Cumar.
Tuduc uu Cabdi-qays lahaa oo is-na ahaa oo tixdiisii Geeddi-Baabuu ku jirtay oo ahayd: “Intii gaban la dhali laa,
Gu’giisii ka baaqsaday,”
Waxaanay cidina moogayn kaalinta xurmada iyo xusuustaba lahayd ee ay haweenku ka soo qaateen hawlihii: Dibuheshiisiintsa, Hub-dhigista, Dibudejinta, Dibudhiska, Nabadaynta iyo Horumarka. Waxaanu muran ka taagnayn in ay maanta haweenku yihiin isha nololeed ee qoysaska Somaliland gude iyo dibadba. Ilaahay ha ka abaal-mariyo.
SNM waxay ahayd jabhad ballaadhan oo ay ku bahoobeen dad kala duwan oo lahaa aragtiyo siyaasadeed oo aan aad u qodnayn, kuwaas oo ku mideysnaa Barnaamaj Siyaasiya oo Urur. Waa wax dabiiciya oo dunidaba ka dhaca in ay mararka qaarkood iska hor yimaaddaan ama fikirkaba isku diidaan dad urur ku wada jiraa. Iska-hor-imaadkaasi mararka qaarkood dood iyo hadalba wuu noqdaa; mararka qaarkoodna dagaal hubeysanba wuu noqdaa. SNM waa Ururka Soomaaliyeed ee ugu cimriga dheeraa Jabhadihii Xoreynta Soomaaliyeed, taana wuxu ku gaadhay dimuqraadiyaddii uu ku soo dhex barbaaray ee ururnimo iyo daabicii shacbiyeed ee uu Ururku lahaa.
Geesta kale marka aad ka joogsato labada Kooxoodba waxay u badnaayeen shacbi (civil) in kasta oo ay ka dhex muuqdeen xubno kooban oo saraakiisha ciidammada ka tirsanaa. Beryihii danbe ayay saraakiishu ku soo badanaysaa kooxdii loo yaqaannay “Calan casta”. Xilli danbe ayay samaysamayaan labada Kooxood ee xilliyadii danbe halhayska noqday ee “Khaakhda” iyo “Shiishtu”. Badiba intii “Calan casta” loo yaqaannay ayaa magaca “Khaakhda” la siinayaa, halka kooxda kale oo aanay isku dan iyo ujeeddo ahayn looga bixinayo “Shiish”. Halka magacyadii hore laga yaabo in bixintooda ay dadweynuhu ka qayb galeen, labadan magac ee danbe bixintooda inta badan waxa loo tiriyaa in ay ka danbeeyeen labadan kooxood. In kasta oo ay labadan kooxood iska lahaayeen xag-jirayaashooda, haddana waxa aan meesha ka madhnayn in ay jireen qaar khadka cagaaran hadba halka dantoodu ka muuqato u tallaabaa. Hadba kooxda aan talada dalka hayn ama aan dawladda ka tirsanayn ayaa SNM ah, kuwa kalena waa mucaarid. Marka ay kooxi dawladda gasho ayay tidhaahdaa: “SNM waxay dhashay dawlad”. Marka ay kooxdaasi dawladda ka baxdana waxay ku dhawaaqdaa: “Xuquuqdii agoonta, naafada iyo Mujaahidiinta xaggee la dhigay?” Xaalka ayaa mararka qaarkood caynkaas iska ahaa.
1. Dad ay daacad iyo niyad-samaan ka tahay oo aan arag ama ka war-qabinba wax SNM u yaallay ama u qornaaba;
2. Dad og ama garan kara in SNM wax u qornaayeen oo si ay SNM iin ugu yeelaan ama u qiimo-tiraan ugu andacooda ama meelahaa kaga sheekeeya: “Waxba uma qornayne, qori dable iyaga oo la ordaya ayay dalka iska soo galeen;”
3. Dad halgankii ka habsaamay ama ka soo hor jeeday oo aan waxbaba la jeclayn SNM;
Kooxda hore ee daacadnimada iyo niyad-samaantu ka hadlinayso si walaalnimo ku dheehan tahay ayaan ugu soo qaddimayaa Barnaamajkii Siyaasiga ahaa ee SNM, aniga oo ka cudur-daaranaya in aanu hore u faafin sababtu waxay doonto ha ahaato e’. Labada Kooxood ee danbe aniga oo wejiga kaga dhufanaya ayaan ku leeyahay: “Waa beentiin, hooya waa kan e’ horena waad u ogeydeene.”
Xaashaa wa kallaa! SNM wax waa ay u yaalleen….Waa ay u qornaayeen…..Weliba waxa ugu badnaa ee ugu hodansaanaa ee urur Soomaaliyeed oo siyaasiya oo hubeysani yeelan karayay ayaa u qornaa. Ayaa u yaallay. Ayaan-darradu se waxa ay tahay: Waan la fulin…..Waan lagu dhaqmin. SNM waxay ahayd jabhad ballaadhan oo dad aragtiyo door ah lihi ku bahoobeen oo lahayd Barnaamaj Siyaasiya oo guud ahaan laga mideysnaa. Nidaam aan cidna badbaadinayn ayaa lala dagaallamayay, markaa intii is-ogaatay in aanay nidaamkaa ka badbaadayn ayaa isku bahaysatay SNM si ay nidaamkaa ula dagaallanto.
Dhalliishu kuma jirto SNM baan wax u qornayn ama aanay waxba u oolline, dhalliishu waxay tahay: Wixii SNM u qornaa baan la fulin ama lagu dhaqminba. Markaa waa been fikradda ah SNM waxay dalka soo gashay iyada oo aanay waxba u qornayn. Waxba yaan hadal-tiro idin ku daallinne, aan hortiinna bal soo dhigo Barnaamajkii Siyaasiga ahaa ee SNM ee lagu oggolaaday Shirweynihii 6aad ee Caadiga ahaa ee SNM oo ku qabsoomay Balli-gubadle 31/3/1990kii – 28/4/1990kii.
BARNAAMAJKII SIYAASADEED EE SNM:
Barnaamajkii ayaan sidii uu u qornaa idiin ku soo gudbinayaaye, yaan loo qaadan wax aan anigu qoray.
Marxaladdii guuxa, cabashada iyo ka-damqashada xukunkii Faashiga ahaa oo ahayd: 1969kii – 1981kii;
Mid muddo dhow ah (Short term objectives),
Mid muddo fog leh (Long term objectives),
Ridista buuxda ee halgan dadweyne oo hubeysan lagu ridayo Talsika Faashiga ah ee Siyaad Barre iyo dhaxal-sugayaashiisa dhagareysan, lagana xoreeyo Jamhuuriyadda Soomaaliya oo idil,
Dhisidda xukun dimuqraadi ah oo ku-meel-gaadh ah ayna ka qayb gelayaan xoogagga mucaaradka Soomaaliyeed, kuwa si toos ah uga qayb galay halganka hubeysan iyo kan siyaasiga ahba, kana qayb galay xoreynta dalka iyo dadka. Si ujeeddooyinkaas loo gaadho wuxu DH.W.S inta lagu jiro marxaladda halganka hubeysan ku shaqaynayaa:
In marxaladda kala-guurka oo la bilaabanta ridista taliska digtaatooriga ah, la dhiso xukun dimuqraadi ah oo ku-meel-gaadh ah, kana kooban xoogagga xoreynta Soomaaliyeed ee sida dhabta ah u metela Shacbiga Soomaaliyeed, talo-wadaag ahaanna ugu hoggaamiya tubta sinnaanta iyo horumarka ijtimaaciga ah,
In ay xukuumadda ku-meel-gaadhka ahi sugto midnimo qaran ahaaneed iyo amniga dalka, xaqiijisana madax-bannaanida dhabta ah ee qaranka,
In la sii daayo gebi ahaanba dadka siyaasadda u xidhan lana tir-tiro wax allaale wixii xukun siyaasadeed ah ee lagu qaaday muwaadiniinta dalka dibadda kaga maqan, wixii muwaaddin xukun baaddil ah lagu dilayna loo aqoonsado geesiyaal u shahiiday qaddiyadda ummadda, wixii hanti ah ee qoysaskaa lagala wareegayna dawladdu dib ugu celiso,
In maxkamad caddaaladeed la soo taago Madaxdii sare ee Taliskaa oo ay u horreeyaan Maxamed Siyaad Barre iyo kaaliyayaashiisa iyo hawl-wadeennadiisa, laguna oogo denbiyada ah: khiyaamo-qaran oo heer sare ah, dil iyo xasuuq dadweyne, khaarajin iyo jidh-dil maxaabiis siyaasadeed, burburin magaalooyin, berkado iyo ilihii nolosha, xatooyo xoolo ummadeed, isku dil beelo iyo duminta diinta islaamka, cunsuriyad cad oo ay si gaar ah oo ka tallowsan sohdimaha Jamhuuriyadda Soomaaliyeed oo nabadda iyo xasilloonida Gobolka halis geliyay horukacii ijtimaaciga ahaana naafeeyay, laguna baabi’iyay hanti iyo dadba,
In aasaas fayo-qaba loo dhigo dibuhabaynta guud ahaanba maamulka dawladda sida garsoorka iyo fulinta caddaaladda iyo ciidammada qalabka sida iyadoo si xeel dheer loo fannidayo kuwa hawlaha xasaasiga ah lagu aamminayo, raad-raacna laga samaynayo facaa’ilkoodii muddadii madoobayd ee ay xukunka hayeen,
In majarahoodii lagu soo celiyo xuquuqdii aadamiga iyo xorriyadihii dimuqraadiga ahaa ee uu Talisku cagta hoosteeda geliyay, xorriyadahaa iyo xuquuqdaa oo saamaynaya dhinac kasta oo nolosha bulshada ah,
In Qaranka loo soo celiyo deynka sida sharciga ama sharci-darrada ah looga qaatay Baananka welina maqan,
In Guddi heer Qaran ah loo saaro baadhista hantida Qaranka laga lunsaday, Maxkamad go’aan ka gaadhana la hor geeyo,
In Gobollada dib la isugu habeeyo lana xoojiyo awooddooda madax-bannaaneed,
In goobaha laga soo dooranayo Xildhibaannada heer Qaran dib loo habeeyo (Electoral Constituency),
In iyada oo lala kaashanayo Dawladaha dunida iyo hay’adaha caalamiga ah dib loo dhiso magaalooyinka iyo halbowlayaashii kale ee nolosha ee uu Taliska Siyaad Barre tirtiray, xooggana la saaro Gobollada ay masiibadaasi ugu daran tahay,
In xoogga la saaro sidii dalka dib ay ugu soo laaban lahaayeen aqoonyahannadii iyo farsamo-yaqaannadii dalka dibadda uga baxay caddaalad-darro awgeed,
In Madaxda Dawladda (Madaxweynaha, Wasiirrada, Wasiir-ku-xigeennada iwm), Mudanayaasha barlamaanka, Madaxda Sare ee Ciidanka iyo Maamulka iyo weliba shaqaalaha Dawladda ee haya jagooyinka xasaasiga ahi, aanay si toos ah u maamulin danahooda ganacsi, weji kasta ha lahaatee,
In Madaxda iyo Hawl-wadeennada kor ku xusani ay xisaabtooda iyo hantidooda kaleba soo bandhigaan marka ay qabanayaan xilka Qaranka si ay xisaabahaa iyo hantidaasi u diiwaan-gashanaadaan,
In awoodda dawladda loo raarrido qaybaha dalka sida Gobollada iyo Degmooyinka, taladana ay ka qayb qaataan qaybaha kala duwan ee dadku sida Ururrada Bulshadu,
In la diyaariyo Dastuur Qaran oo dimuqraadi ah oo ka tarjumaya astaamaha gaarka ah sida: Diinta, Dhaqanka iwm,
In Dastuurkaa isaga ah afti-dadweyne loo qaado,
In bulshada Soomaaliyeed dhaqankii iyo anshaxii wanaagsanaa ee ay hiddaha u lahayd lagu soo dabbaalo,
In Dawladda cusubi xil iska saarto abuuritaanka shaqo, lana dagaallanto shaqo-la’aanta, laguna baraarujiyo dadweynaha yuhuunta shaqo-jacaylka iyo isku-fillaanshaha qof ahaaneed,
In la dejiyo qaanuun ku saabsan dhisidda xorta ah ee Xisbiyo siyaasadeed oo Qaran, Ururro Bulsho iyo kuwo xirfadeed,
In laga shaqeeyo in maal-gelinta gudaha iyo ta dibaddaba loo jiheeyo kobcinta ilaha wax-soo-saarka oo loo raaco tub lagu casriyaynayo Wershedaha iyo Ganacsiga, laguna shaqeeyo sidii firfircoonaanta dhaqaalaha magaalada iyo miyugu u wada socon lahaayeen,
In uu jaro Baanka dhexe oo habeeyaa, maamulaana siyaasadaha lacagta,
Maamulka Dhaqaale ee dawladdu wuxu hirgelinayaa hawlaha aasaasiga ah ee daryeelka Bulshada,
In Dawladda cusubi siiso mudnaanta koowaad wershadeynta dalka,
In la qorsheeyo sidii biyo ku filan loogu heli lahaa miyiga lana maal-geliyo xannaanada xoolaha nool iyo dheefta kale ee ka soo baxda. In la dhiso wershado fudud oo ku shaqeeya xoolaha nool iyo dheeftooda,
In la dejiyo reer-guuraaga si loo kobciyo dhaqaalahooda, adeegyada bulshadana loo gaadhsiiyo,
In la isku dhafo wax-soo-saarka Beeraha iyo dhiqitaanka xoolaha nool,
Kordhinta soo-saarista cuntada aasaasiga ah ee dadku qabatimay si loo yareeyo cuntada la soo dejiyo,
U-fidinta kaalmo dhaqaale, mid amaaheed oo fudud iyo mid farsamo oo Beeraleyda iyo Hay’adaha Beeraha ku lug leh,
Dhiirri-gelinta iyo samaynta wershado fudud oo ku shaqeeya dheefta Beeraha,
In Xijiga (Beeyada, Xabkaha iwm) diraasad gaar ahaaneed lagu sameeyo si hore loogu mariyo,
U-soo-celinta Beeraleyda yar yar siiba kuwa beeraha labada webi dhulka uu Talisku ka baro-kiciyay ee uu uga boobay maal-qabeenka iyo madaxda dawladeed ama iyadoo loo cago-jugleynayo laga dhaafsaday qiimo-lacageed oo yar,
In la sameeyo habka lahaanshaha-dhuleed oo ku salaysan wax-soo-saar
In la dejiyo shuruuc adag oo ku saabsan joojinta dabar-goynta Ugaadha, tarankoodana la kordhiyo,
In la ilaaliyo dhirta, lana qaado mashruuc Qaran oo hore loogu dhigayo kaymaynta (Afforestation) lalana kaashanayo Hay’adaha caalamiga ah ee ilaalinta Degaanka,
In la dhowro daaqa lana joojiyo nabaad-guurka,
In la tir-tiro seerayaashii iyo xidhmooyinkii sida sharci-darrada ah loo siiyay dad gaar ah,
In Degaanka bad iyo berriba laga ilaaliyo wasakhda iyo wasakhaynta, laga feejignaado qashinka maraakiibta shisheeye (Nuclear Waste),
Kor-u-qaadista tayada waxbarashada iyo dejinta manhaj u qalma nooca tacliinta aan rabno,
Waa in la dhiirri-geliyaa baraha maaddi ahaan iyo macnawi ahaanba,
Waa in la xoojiyaa barashada Diinta Islaamka iyo xoog-saaridda dhaqanka islaamiga ah, sida nidaaminta dugsiyada Quraanka,
Ballaadhinta Dugsiyada, Machadyada farsamada iyo Jaamicaddaba,
Waa in af-soomaaliga loo siticmaalo waxbarashada aasaasiga ah iyo tan dugsiyada sare ee caamka ah, lana bar-bar wado afafka kale,
Waa in mudnaan gaar ah la siiyaa waxbarashada dadka waaweyn iyo la-dagaallanka qoris-akhris-la’aanta (Illetracy),
Ururka Dh.W.S wuxu aqoonsan yahay in ay jiri karaan dugsiyo gaar ahaaneed (Private Schools),
Waa in la sameeyaa Ha’ad Qaran oo ka mas’uul noqota horumarinta afka hooyo iyo casriyeyntiisa cilmi ahaaneed iyo weliba dhiirri-gelinta iyo horudhigga fanka, suugaanta Soomaaliyeed iyo samaynta Machad Sare oo arrintaa qaabbilsan,
Waa in Garsoorku ka madax-bannaanaadaa faro-gelinta dawladda,
Waa in la tirtiraa dhammaanba shuruucda jujuubka iyo xad-gudubka ah ee ku liddiga ah habsami-u-socodka caddaaladda, Diinta Islaamka iyo dhaqanka ummadda lana baabi’iyo habka garsoorka ee Talsiku u dejistay in uu isku ilaaliyo dadkana ku cadaadiyo,
In la tir-tiro Maxkamadihii gaarka ahaa ee Taliska,
In Garsoorayaasha iyo Xeer-ilaaliyayaasha lagu xulo: Karti, aqoon iyo hufnaantooda,
In Sharcigu maareeyo dadka, Muwaaddiniintuna lahaato xuquuq siman, denbiilana ahayn ilaa ay caddayso Maxkamad Sharci ahi,
In kor loo qaado aqoonta sharci ahaaneed iyo tan guud ee Garsoorayaasha,
In la diiwaan-geliyo lana xilqaado daryeelka iyo xannaanaynta xaasaskii iyo ilmihii Mujaahidiinta shahiidday,
In la daryeelo naafada halganka hubeysan ku laxaad beeshay, kuwa lugaha iyo gacmaha beelay loo sameeyo kuwo macmal ah, qaab ilo-shaqona loo sameeyo. In loo dedaalo sidii Hay’adaha caalamiga ah ee samo-falka sida UNICEF iyo Laan-qayrta Cas iyo Bisha Cas loola kaashan lahaa hirgelinta arrintan iyada ah,
In la abuuro ciidan Qaran oo cusub oo u adeega ilaalinta difaaca dalka iyo dadka laga difaacayo gardarro dibadeed, ka-qayb galka mashaariicda horumarinta dalka, kor-u-qaadidda garaadka siyaasadeed ee ciidanka iyo dimuqraadiyadaynta xidhiidhka ciidanka dhexdiisa iyo adkaynta kala-danbaynta,
In Xubnaha ciidanka xoreynta la siiyo ahmiyadda iyo hormeynta koowaad marka ciidanka Qaranka la abuurayo,
In la sameeyo maalin Qaran oo ah maalinta shuhadada oo lagu xusayo geesiyaashii ku shahiiday halgankii gobannimo-doonka ee gumeysiga lagaga hor-jeeday iyo ka xornimo-doonka ah ee lagula dagaallamayay Taliska Faashiga ah ee Siyaad Barre si dhab ahna loo qoro taariikhda dagaalladaa,
Raacista siyaasad dibadeed oo dhex-dhexaad wax-ku-ool ah kuna qotonta xurmaynta talataalliga ah, xaq-dhowrka midnimada iyo madax-bannanida dal ahaaneed, isku duullaan la’aan iyo faro-gelin la’aanta arrimaha gudaha ee dal kale, nabad ku-wada noolaan iyo horudhigga xidhiidh dhaqaale iyo ku dhaqan ee Soomaaliya iyo dalalka dhowra mabaadiidaa iyada ah,
U-halganka nabad iyo xasillooni ka hirgasha adduunweynaha siiba gobollada Geeska Afrika, Badda cas iyo Badweynta Hindiya, gobolladaas oo ay tahay in uu ka caagganaado xiisadaha uuna noqdo goob nabadeed iyada oo ay tahay in iskaashi walaaltinnimo oo dhinac kasta ahi uu dhex maro: Soomaaliya, Itoobiya, Jabuuti, Yaman, Kiiniya iyo dalalka kale ee badda Cas iyo Badweynta Hindiya,
Ku-dhaqanka siyaasad cad oo ujeedda adkaynta xidhiidhka walaaltinnimo ee Soomaaliya iyo Itoobiya oo faa’iido talantaalli ah u leh dadyowga labada gobol,
Taagerada buuxda ee halganka xaqa ah ee dadyowga reer Falastiin iyo Koonfur Afrika oo ay kala hoggaaminayaan Ururka Xoreynta Falastiin (PLO) iyo Golaha waddaniga ah ee Afrika (ANC),
La dagaallanka siyaasadda sahyuuniyadda iyo midab-takoorka,
Waxaanu aqoonsan nahay Dawladda falastiin ee waddaniga ah,
Waxaanu aqoonsan nahay in xukun loo siman yahay ka dhasho Koonfur Afrika, dadyowga ku noolina ka wada tashadaan aayahooga iyaga oo siman,
Xurmaynta iyo u-hoggaansanaanta Xeerarka iyo Axdiyada Ururka Midowga Afrika (OAU), kan Jaamicadda carabta, kan Dawladaha islaamka iyo Qarammada Midoobay,
Ku-shaqaynta xidhiidh gaar ah oo ballaadhan oo dhex mara Soomaaliya, dalalka iyo xoogagga xoreynta ee ku liddiga ahaa Taliska Siyaad Barre una hiiliyay halganka dadweynaha,
U-hawlgalka hab dhaqaale oo cusub oo adduunweynaha ka hirgala iyo xidhiidh ganacsi oo loo siman yahay,
Dib-u-eegidda saldhigyo iyo xero-guulyo millateri shisheeye oo dalka lagu yeesho,
In la xurmeeyo heshiisyada caalamiga ah,
Guddoomiyaha Sh/weynaha 6aad,
Xidhiidhiyaha Xoghaynta Sh/weynaha 6aad,